IArgyle yezeNtlalontle: UkuKhangela ukuKhangela kunye neMidiya yokuSebenza | Martech Zone
Kangangexesha elide, umhlobo kunye nogxa Jason Falls Ibisoloko isisebenzisana kwaye isenza ubuchule be Argyle yoLuntu. UJay Baer ungumlandeli ngokunjalo. Kudala sisebenzisa izixhobo ezahlukeneyo kwaye sinombhalo omnye kuthi iarhente yemidiya yoluntu sebenza. Yayiliqonga elifanelekileyo kodwa amaxabiso ayengamantongomane.
UJason wazisa abantu abakhulu eArgyle kwaye babonisa iqonga kuthi. Ndandichukumisekile. Ayisiyiyo kuphela ixesha-lokwenyani kunye nedashboard eyomeleleyo kakhulu ukupapashwa kwezentlalo, ukubandakanyeka kwabathengi, yaye uhlalutyo kwezentlalo… Ukwehla kwemihlathi kweza xa iqela libonisa ukukwazi ukulandelela ukuguqulwa kunye nenkqubo. Nalu umpu ngokubanzi ukunika ingxelo ngokuguqulwa kunye nexabiso leedola (ukuseta inani ledola kukhetho).
Ukunika ingxelo ebanzi iphulo lokuguqulwa ngumthombo wemithombo yeendaba:
Kwaye eyona nto ipholileyo ukulandelela ukuguqulwa kunye nefuthe ngeakhawunti:
I-Argyle idityaniswa noHlaziyo lukaGoogle, ukumakisha ngokuzenzekelayo amakhonkco akho kunye neeparitha ze-GA ukuze ukwazi ukujonga amaphulo kuGoogle. Oku kubalulekile, kuba uninzi lwezithuthi zentlalo luye lwanyathelwa 'ngokuthe ngqo' ukugcwala njengoko ujonge kwimithombo yezithuthi kuHlahlelo lwakho. Ndibhalile malunga nendlela Uhlalutyo lwezithuthi zentlalo yinto engekhoyo yohlalutyo ngeenkcukacha.
Okt 14, 2011 ngexesha 10:46 AM
Enkosi ngeposi, Douglas! Ndonwabe kakhulu kukufunda ukuba senze umhlathi wakho uwe. 🙂
I-CEO, uArgyle Social
Oktobha 14, 2011 ngo-8: 05 PM
Enkosi Douglas ngamagqabaza anobubele.